Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247623 times)
« Reply #750 on: October 08, 2012, 01:30:25 PM »
" စေ တ နာ အ ကျိုး ပေး "
" မသီတာ..ဒိတစ်လထဲမှာ ရှင့်ယောက္ခမကြီး မှိုအဆိပ်သင့်တာ သုံးကြိမ်တောင် ရှိပါပကော "
" အဲ့ဒါ ကျမ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်..။ ကျမစားဖို့ ဆိုပြီး ယောက္ခမကြီးက မှိုဟင်းချက်တယ်..ဒါပေမဲ့
အသက်ကကြီးတော့ သတိမေ့ပြီး သူ့ ဟာသူ ယူစားမိတာလေ...အဲ့ဒါကြောင့်ပါ.. "
" သ တိ ပေး စာ တမ်း "
စားသောက်ဆိုင်တွင် ချိတ်ထားသော သတိပေးစာတမ်း..
" အရာခပ်သိမ်းကို မေ့ပစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လူကြီးမင်း အရက်လာသောက်တာဖြစ်တယ်..
ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံ ကြိုရှင်းပါ.. "
« Reply #751 on: October 25, 2012, 10:02:53 AM »
" ခက် ခက် ခဲ ခဲ "
ထောင်ထဲရောက်နေသော မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ထံ ၄င်း၏ရှေ့ နေ လာတွေ့ သည် ။ မာဖီးယားခေါင်းဆောင်က
" ရော့ .. ဟော့ဒီ အတက်ချီကေ့စ်ကို ယူသွား..။ အထဲမှာ ဒေါ်လာ တစ်သန်း ပါတယ်..။ ကျုပ်ကို ထောင်ဒဏ်
တစ်နှစ်ပဲ ချဘို့တရားသူကြီကို စည်းရုံးပါ.. "
" ကျနော် စဉ်းစား ပါရစေ "
" ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့ ..ခင်ဗျားစဉ်းစားတာ ကျုပ် စိတ်မ၀င်စားဘူး..ပိုက်ဆံယူပြီး. ကျုပ်ခိုင်းတာလုပ်..ဒါပဲ "
အိတ်ကို ဆွဲပြီး ရှေ့ နေ ထွက်သွာားသည် ။ စီရင်ချက်ချမည့်ရက် ရောက်လာသည် ။ တရားရုံးမှာ ပရိသတ်တွေ အတော်
များများ ရောက်နေကြသည် ။ တရားသူကြီးက စီရင်ချက်ကို ဖတ်ကြားသည် ။
" ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် ကျခံစေ.... "
ရှေ့ နေကို မာဖီးယားခေါင်းဆောင် ၀မ်းသားအားရ ပုခုံးကို ဖက်ပြီး မေးသည် ။
" မှန်မှန် ပြောစမ်းပါ... ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ပဲပေးဘို့တရားသူကြီးကို သိမ်းသွင်းရတာ အတော် ခက်သလား "
" ခက်တာတော့ မပြောနဲ့ တော့...သူက ခင်ဗျားကို ကွင်းလုံးကျွတ် လွှတ်မလို့လုပ်နေတာ .. "
« Reply #752 on: July 09, 2013, 11:13:00 AM »
" တွေ့ လိုသူ "
ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ရုပ်ရှင်ပြပြီး ဧည့်ခံပွဲတစ်ခုလုပ်၏ ။ ဧည့်သည်များအကြား
" ဂျင်မီဝုဖ် ကိုတွေ့ မိလားရှင် " ဟု ဓါတ်ပုံဆရာကို မေးလိုက်သည် ။
" မတွေ့ မိဘူးဗျ..ရုပ်ရှင်မင်းသား မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်တော့ ဟိုမှာ ရှိတယ် ."
" အို...ကျမ လက်ထပ်ထားတာ မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ် မဟုတ်ဘူးရှင့် "
" တစ်ခုတော့ ခွင့်ပြုပါ "
ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိကတိုက်သို့ သွားသည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်`၌ လေယာဉ်ပေါ်တွင်
ဆေးလိပ်မသောက်ရန် စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းက ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားသည် ။ ခရီးသည်
တစ်ဦးက စည်းကမ်းမဲ့ သောက်မည်အပြုတွင် လေယာဉ်မယ်ရောက်လာပြီး
" လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မပြုပါဘူးရှင်.. "
" ဒါဆို မသောက်တော့ပါဘူး..လေယာဉ်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ သွားလာရတဲ့ ကျနော့်ကို
အပျင်းပြေ ရည်းစားစကားတော့ ပြောခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်.."
« Reply #753 on: January 14, 2014, 03:08:44 PM »
ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံတူညီ ကျောင်းသား ကျောင်းသူလေးများနှင့် ဆရာမလေးတို့ဓါတ်ပုံအတူတူ
ရိုက်ကြသည် ။ ပြီးနောက် အတန်းသူအတန်းသားအားလုံး ဓါတ်ပုံ ယူကြရန်အတွက် ဆရာမလေး
" ဒီဓါတ်ပုံလေးတွေက နောင်တစ်ချိန်ကြရင် အမှတ်တရ ဖြစ်လာမှာကွဲ့ ..ဒါကြောင့်အားလုံး
" အသက်ကြီးလာလို့ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါ..ဒါကတော့..မောင်လူကြီး..အခုတော့ ဗိုလ်မှူးကြီး
ဖြစ်နေပြီ..ဒီတစ်ယောက်က မမဲတူ..သူက စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီလေ.."
" ဒါကတော့..ဒို့ ဆရာမပေါ့..အခုတော့..သေရှာပြီ... "
« Last Edit: January 14, 2014, 03:10:29 PM by tunaye2011 »
« Reply #754 on: January 18, 2014, 02:23:44 PM »
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုတွင် ဖြစ်သည် ။ အမျိုးသမီးတွေသီးသန့် စုရုံးပြီး တည်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခု
တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဟောပြောပို့ ချနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ဟောပြောနေသူက ကိုယ့်
အမျိုးသားကို အမှန်တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ဟု အမျိုးသမီးတွေကို မေးသည် ။
အမျိုးသမီးအားလုံး လက်ညှိုးထောင်ကြသည် ။
နောက်တစ်ခါ ကိုယ့်အမျိုးသားကို ဘယ်နေ့ က ချစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးပြောခဲ့သလဲ လို့ထပ်မေးပြန်သည် ။
ဒီတစ်ခါတော့ အချို့ က ဒီနေ့၊ အချို့ က မနေ့ က အချို့ က မှတ်တောင် မှတ်မိဘူးဟု ဖြေကြသည် ။
ထိုအခါ ဟောပြောနေသူ အမျိုးသမီးကြီးက ကိုယ့်ယောင်္ကျားတွေဆီကို I Love You , Sweetheart .ဆိုတဲ့
စာတစ်စောင် ပို့ ခိုင်းသည် ။ ထို့ နောက် ဖုန်းတွေ အပြန်အလှန်လဲပြီး ပြန်စာကို ဖတ်ခိုင်းပါတယ်.။
" ဘာလဲ..ကားတိုက်မှု ဖြစ်ပြန်ပြီလား.."
" နင်.အခု ဘာတွေပြောနေတာလဲ..ငါနားမလည်ဘူး.."
" ဒီစကားချည်းလာပြောမနေနဲ့ ..ငွေဘယ်လောက်လိုလို့ လဲ."
" ကိုယ်အိပ်မက်ထဲ ရောက်နေတယ်ထင်တယ်.."
" ဒီ message က ဘယ်သူအတွက်လည်းဆိုတာ ငါသေချာမသိရင် နင် ဒီနေ့ သေဘို့ ပြင်ထား "
" အရက်မသောက်ပါနဲ့ လို့အတန်တန်တားထားရဲ့ နဲ့ ကွာ.."
အဲ့ဒီထဲမှာ အကောင်းဆုံး ပြန်စာကတော့
" မင်း ဘယ်သူလဲ "
« Reply #755 on: January 28, 2014, 12:22:47 PM »
တောလမ်းခရီးတစ်ခုမှာ လူငယ်တစ်ယောက်နဲ့အဖိုးအိုတစ်ဦး တွေ့ ကြတယ်.။
" အဘ ..ဘယ်သွားမလို့ လဲ "
" ဟိုဘက်ရွာကွာ "
" ဒါဆို အတူတူ သွားကြတာပေါ့ "
" ဟိုဘက်ရွာကို ဘာသွားလုပ်မှာလဲ အဘ "
" အငြိမ့်ကမယ်ပြောလို့သွားကြည့်မှာကွ.."
" ဟင်...ကျနော်သာ အဘအရွယ်ဆို အငြိမ့်မကြည့်တော့ဘူး "
အဖိုးအိုကတော့ ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး ။ ခဏနေတော့ အဖိုးအိုက ပုလင်းတစ်လုံးထုတ်ပြီး
" ဘာတွေလဲ အဘ "
" အရက် "
" ဟင်..ကျနော်သာ အဘအရွယ်ဆို အရက်မသောက်တော့ဘူး.."
ခဏနေတော့ အပင်တစ်ပင်အောက်မှာ ခရီးတစ်ထောက်နားကြတယ်..။ လူငယ်က
အပင်ပေါ်မော့ကြည့်ပြီး ပြောတယ် ။
" ဟာ..အဘ ..သရက်သီးတွေဗျ.."
" ဟုတ်တယ်..ဒီအပင်က အသီးက တော်တော်ကောင်းတာ..ငါတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက
" စားချင်တယ်ဗျာ "
" ငါသာ မင်းအရွယ်ဆို အပင်ပေါ်တက်ခူးတယ်.." ဆိုတော့ လူငယ်လဲ မခံချင်ဖြစ်ပြီး
အပင်ပေါ် တက်ခူးပါလေရော..။ ခူးပြီးလို့ ပြန်ဆင်းတော့ မဆင်းတတ်တော့ဘူး ။
" အဘ..လုပ်ပါဦး ဒီဂွကြားကနေ ဆက်မဆင်းတတ်တော့ဘူး "
" ငါသာ မင်းအရွယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ဂွကြားကနေ ခုန်ချတယ် "
ဒါနဲ့ အဟုတ်မှတ်ပြီး ခုန်ချလိုက်တာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း သွင်သွင်ကျိုးပါလေရောဗျာ..။
" အား....ကျိုးပြီအဘရေ "
" ကျိုးမှာပေါ့ .ဒီလောက်အမြင့်ကြီးက ခုန်ချတာ "
" ဗျာ...ခုနပြောတော့ ကျနော့်အရွယ်သာဆို အဘ ခုန်ချတယ်ဆို.."
" အေးလေ..ငါမင်းအရွယ်တုန်းက ဒီအပင်က နိမ့်နိမ့်လေးကွ.."
« Last Edit: January 28, 2014, 12:26:32 PM by tunaye2011 »
« Reply #756 on: January 28, 2014, 12:36:22 PM »
အရက်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိစေချင်လို့ အဖေက သားကို လက်တွေ့ပြပါတယ်..။
ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်က်ိုယူပြီး တစ်ခွက်မှာ ရေထည့်လိုက်တယ် ။ နောက်တစ်ခွက်မှာတော့
၀ီစကီထည့်ထားလိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီခွက်တွေထဲကို တီကောင်တစ်ကောင်စီ
ထည့်ပြလိုက်တယ်..။ ပထမရေခွက်ထဲကို တီကောင်တစ်ကောင်ထည့်တော့ တီကောင်က
အသက်ရှင်နေပြီး..၀ီစကီခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ တီကောင်ကတော့ တွန့် လိမ်ပြီး အသက်
ထွက်သွားပါတယ်.။ ဒီတော့ အဖေက ပြောတယ်..။
" ကဲ..သား..ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သားအမြင်လေး ပြောစမ်းပါဦး.."
ဒီတော့ သားဖြစ်သူက ပြန်ဖြေတယ်..။
" ဟုတ်ကဲ့..အရက်သောက်ခြင်းဟာ ၀မ်းထဲမှာ ရှိတဲ့ သန်ကောင်တွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်.."
« Reply #757 on: February 03, 2014, 03:45:47 PM »
ကိုဘမောင် သူငယ်ချင်းက ယာဉ်ထိန်းရဲမေ တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်တယ်.။
မနေ့ ညက သူ့ ရဲ့မင်္ဂလာဦးည လေ..
ယောင်္ကျားချင်းဆိုတော့ သူ့ အတွေ့ အကြုံလေးသိချင်တာနဲ့ကိုဘမောင် ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တယ် ။
" ဟရောင်...မင်းရဲ့ လူပျိုဘ၀ နောက်ဆုံးညလေးအကြောင်း ဖောက်သယ်ချပါဦးကွ..ဟီ ဟိ.."
" မဟီဟိနဲ့ ဟေ့ရောင်..."
" ဟင်....ဘာဖြစ်လို့ တုန်းဟ ."
" ညက ငါ့ကို over speed ဆိုပြီး ဒဏ်ငွေ ၅၀၀၀ိ တပ်တယ်..။ မရပ်ရမဲ့ နေရာမှာ ရပ်လို့ .
ဒဏ်ငွေ ၅၀၀၀ိ...၊ မ၀င်ရတဲ့လမ်းကို ၀င်လို့ ဆိုပြီး ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀၀ိ တပ်တယ်.."
" ဒဏ်ငွေက ပြဿနာမရှိဘူး...ကျွမ်းကျင်မှု မရှိလို့ ဆိုပြီး..လိုင်စင် တပါတ် ပိတ်လိုက်တာက
« Reply #758 on: February 11, 2014, 09:22:11 AM »
ခင်ဗျား..ရဲမေကိုတော့ သွားမနမ်းနဲ့ နော်..ခင်ဗျား သွားနမ်းလို့ ကတော့
ရပ်စမ်းးးး.....လက်မြှောက်လိုက် လို့ပြောလိမ့်မယ်.. "
" ဆရာဝန်မကိုလဲ သွားမနမ်းလေနဲ့ ဗျို့ ..ခင်ဗျားနမ်းပြီးရင်..
ပြီးပြီ...နောက်တစ်ယောက် လို့ပြောလိမ့်မယ်ဗျ.."
" အဲ..နမ်းချင်ရင်တော့ ကျောင်းဆရာမကိုသာ နမ်းဗျို့ ...
ခင်ဗျား နမ်းပြီးရင် မှားတယ်..နောက်ထစ်ခါ ထပ်လုပ် လို့ပြောလိမ့်မယ်.. "
« Reply #759 on: January 06, 2015, 02:12:03 PM »